मधेशी दलितको हातबाट जुस पिएर डा. केसीले तोडे अनसन - Samata Khabar
२९ पुष २०७४, शनिबार ११:३१
अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीले अनसन तोडेका छन् । शुक्रबार राति सरकारसंग ५ बुँदे सहमित भएपिछ डा. केसीले शनिबार बिहान १० बजे अनसन तोडेका हुन् ।
स्वास्यमन्त्री दीपक बोहोरा नेतृत्वको टोलीसँग त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै डा. केसीले वार्ता गरेका थिए । मन्त्री बोहोरा नेतृत्वको सरकारी टोलीमा गोविन्दराज पोखरेल र स्वर्णिम वाग्ले पनि सहभागी भएको निराजन बमले वताए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग्दै अनशन थालेका डा.केसीले विगत ५ दिनदेखि अनसनरत थिए ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समिति आजको मितिले ७ दिनभित्र गठन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतको २३ पुसको मुद्दा नं ०७०–WO–०५७१ को उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश हुँदा ‘जहाँसम्म हाल नियुक्त भएका प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैर कानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको’ भनी गरिएको आदेश अनुसार नै निज डिन अग्रवालको नियुक्ति वैध भएको हुँदा निजको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने दोस्रो बुँदामा लेखिएको छ ।
यस्ता छन् सहमतिका बुँदा :
३) त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिले यथाशीघ्र र यथोचित कदम लिने । आइओएमको अधिकार फिर्तासम्बन्धी त्रिवि नियमावली संशोधन गर्नका लागि तत्काल त्रिवि सभा (सिनेट) को विशेष बैठक बोलाउने ।
५) डा.गोविन्द केसीले आमरण अनशनको कार्यक्रम अन्त गर्ने ।